Universal Tv Live - Mareykanka oo sheegay ciidamada Somaliya inuu u sameyn doono t...
Mareykanka oo sheegay ciidamada Somaliya inuu u sameyn doono tababar iyo qalabeynDowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay xoojinayso tababarada la siinaayo ciidamada xoogga dalka Somaliyed si ay uga hortagaan Weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan Somaliya.
Sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada dowladda Mareykanka ee ku sugan Qaaradda Afrika ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan tababarayaal ka tirsan Ciidamada Mareykanka soo saarista Cutubyo ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka Somaliya oo si heer sare ah loo tababaray.
Sarkaalkaasi oo wareysi siiyay TV-ga CNN ayaa sidoo kale tilmaamay in Ciidamada Somalida laysku dari doono tababaro iyo sidoo kale qalabeyn.
“Taliska Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Qaaradda Afrika waxaa ka go’an soo saarista iyo sidoo kale tababarida Ciidamo tayo leh oo ka hortagga Weerarada Al-Shabaab, Ciidamada Soomaalida waxaa si gaar ah uga taageeri doonaa qalabeynta” ayuu yiri Sarkaalkaasi.
War Saxaafadeed dhawaan kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in la helo xeelad looga hortagi karo Weerarada Al-Shabaab.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa awood dheeraad ah siiyay Ciidamada ku sugan Qaaradda Afrika si ay amar la’aan u beegsadaan goobaha ay joogaan Al-Shabaab.
Sidoo kale dhawaan Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray Ciidamo Mareykan ah oo kuwaa soo tababari doonaa Ciidamada Milatariga Soomaaliya.NextBeesha caalamka oo soo dhaweysay dhis...PreviousGuddi Wasiiro ah oo loo magacaabay wa...Comments